U-Semalt Islamabad Uchwepheshe: Ingabe Iwebhusayithi Yakho Ye-Commerce Iyakwazi Ukwelashwa?
Ukuqonda injini yokusesha nokwenza ngcono (SEO) eziyisisekelo kuyinto okudingekayo uma kuziwa online futhi digital marketing . Amapulatifomu ezokuxhumana ezomphakathi asanda kuba yisihloko sengxoxo ngenxa yokuguqulwa kwezimoto zangempela kanye nenombolo ephezulu yezivakashi ezingase zihlangane nazo.
UMichael Brown, onguchwepheshe ophezulu Semalt , uqinisekisa ukuthi ukuqonda okuyisisekelo se-SEO kubaluleke kakhulu ukubamba ukunakwa kwabasebenzisi abakhona futhi kuthuthukise ukubonakala kwakho kwe-website yakho ye-e-commerce ngesikhathi sangempela.
Kwabaqalayo be-SEO, ukuthuthukisa iwebhusayithi yakho yokuhamba kalula neziphequluli kungakuthola ithrafikhi yangempela. Umkhankaso wakho we-intanethi akudingeki ube yinto enhle kakhulu. Iyini isicabucabu sokusesha? Lona omunye wemibandela ebelokhu ishaya izingqondo zokusesha injini yokuqalisa osebenzayo ekwenzeni umsebenzi wabo we-intanethi ube nezithelo.
Ukuqonda okuyisisekelo se-SEO
Uma kuziwa ekuhlanganiseni ubudlelwane bomphakathi kanye nokumaketha kwedijithali, ukuqonda izindima ze-bots nezicabucabu endaweni yakho akukwazi ukunakwa. Ekukhangiseni, iziphequluli zokusesha kanye ne-bots ukukhomba amakhasi wewebhu namabhulogi. Kwaqalayo, kusho ukuthi izinjini zokusesha zingathola kalula izixhumanisi ngaphakathi kwewebhusayithi yakho..
Izinjini zokusesha zithumela izinhlelo ezithuthukisiwe ezifana ne-bots nezicabucabu ukuze zibhalise amafayela wakho wokubhalisa, imidwebo, namakhasi ewebhu. Ezinye izinkinga zenza kube nzima ngezinjini zokusesha ukuvakashela kabusha amakhasi akho wewebhu namafayela akho. Uma isimo esinjalo sibonakala, amakhasi akho aphezulu aphela alahlekile ku-database enkulu yenjini. Ngokuhamba kwesikhathi, izivakashi zakho ezingahle zikwazi ukufinyelela okuqukethwe kwakho emiphumeleni yokusesha.
Ukuhluleka ukuphatha iwebhusayithi yakho kunganciphisa kalula isayithi lakho. Njengomxhumanisi wokuthengisa, ungavumeli ezinye izici zokusekela injini yokusesha zihambelanwe. Nazi amaphutha avamile aphethwe yi-webmasters kanye nabaxhumanisi bemakethe emikhankaso yabo ye-SEO.
Ukufakela izixhumanisi zokuhamba ezifayeleni ze-flash
Eminyakeni embalwa edlule, i-Google Incorporation isebenze ekusizeni amabhogi nezinsipho ukukhomba amafayili e-flash. Noma kunjalo, iphrojekthi isaphila. Ukushumeka izixhumanisi ukuze kufakwe amafayili kungonakalisa umsebenzi wakho wokumaketha ngokwenza isayithi lakho libe yisilinganiso esiphansi kulezi zindlela zokuhlela.
Izixhumanisi zokuhamba ezihlanganisiwe ngaphakathi kwamafomu
Ukufakela izixhumanisi ngaphakathi kwamafomu kuyindlela yokwenza igama lakho elingukhiye eliguqula ekugcineni kulezi zindlela zokuhlela. Ukugcwalisa ifomu lokufunda okuqukethwe kungaba yisisusa sangempela kubasebenzisi bakho. Ngaphezu kwalokho, ukufaka izixhumanisi ngaphakathi kwamafomu kwenza kube nzima ngezinjini zokusesha ukukhomba okuqukethwe kwakho.
Amathiphu wokuthi ungenza kanjani isayithi lakho linyanyeke
Sebenzisa ukuhamba kwe-breadcrumb noma ukuhamba ngezinyawo ukudala izixhumanisi ezihlukile zamakhasi akho wewebhu
Ukukhiqiza nokufaka izixhumanisi zombhalo ngamakhasi akho abalulekile
Lungiselela isayithi lakho ngekhodi ye-CSS bese udala izakhi zokuhambisa